‘हेलमेट हल्ला मात्रै’ - संवाद - नेपाल
मोटरसाइकल पछाडि बस्नेले समेत हेलमेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम आउने चर्चा चुलिएको छ, यतिबेला । यसको पक्ष–विपक्षमा सामाजिक सन्जालमा विचार आइरहेकै छन् । यसै सन्दर्भमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तसँग कुराकानी :
पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने नियमको आलोचना भइरहेको छ नि ?
यस्तो नियम आउँदै छ भन्ने कुरा नै गलत हो । मैले पत्रकार सम्मेलनमा मोटरसाइकल चालकको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउने हो भने दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ । त्यसलाई नयाँ नियम भनेर प्रचार गरिएछ ।
यति समयसम्म किन खण्डन नआएको ?
मैले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्टै कुरा राखेको थिएँ । त्यसको रेकर्ड हामीसँग छ ।
धेरै आलोचनाले पछि हट्नुभएको त होइन ?
ट्राफिक प्रहरी कानुन बनाउने निकाय होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । अनि हामीले कसरी नयाँ नियम/कानुन नियम ल्याउन सक्छौँ ? हामीलाई विवादमा जबर्दस्त ल्याउन खोजियो ।
यातायात व्यवस्था ऐनमा पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम छ । कार्यान्वयन गर्ने तपाईंकै काम होइन ?
ऐनका सबै कुरा लागू भएका छैनन् । पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउने पहिले लागू भएर पनि ०५९ मा हटेछ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई हामीले दिने पुर्जी २४ घन्टाका लागि मात्र हो । तर व्यवहारमा हुबहु लागू भएको छैन । यसका केही व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यातायात व्यवस्था विभागले हामीलाई कार्यान्वयनको निर्देशन दिए लागू गरिहालिन्छ ।
पछाडि बस्नेलाई हेलमेट अनिवार्य गर्नु जरुरी छ कि छैन ?
काठमाडौँमा गत साउनदेखि वैशाखसम्म ९७ जनाको मोटरसाइल दुर्घटनामा मृत्यु भयो । त्यसमध्ये ३० जना पछाडि बस्ने थिए । घटना प्रवृत्ति हेर्दा हेलमेट लगाउँदा सुरक्षित हुन सकिन्छ । हेलमेट पनि गुणस्तरीय लगाउनुपर्छ । तर यस्तो मापदण्ड नेपालमा बनेकै छैन ।
मापदण्ड बनाउने तयारी छ ?
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एउटा समिति गठन गरेको सुनेको छु । सरोकारवाला भएकाले यसमा हामीले सुझावचाहिँ दिन सक्छौँ । मापदण्डअनुसार हेलमेट लगाए दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ भन्ने ट्राफिकको मान्यता हो ।
सडक अनुशासन कायम गर्न ट्राफिकले किन नसकेको ?
हामीले झनै कडाइ गरिरहेका छौँ । दैनिक साढे २ सय जनासम्मलाई कारबाही हुन्छ । पैदल यात्रुलाई जरिवाना गर्ने गरिएको थियो पहिले । सरकारले नै त्यसलाई हटायो ।
सिंहदरबार मूलगेटबाहेक अन्यत्र लेन मिच्नेलाई कारबाही गरेको देखिँदैन नि ?
त्यहाँ बढी देखिएको मात्र हो । त्रिपुरेश्वर, गौशाला, नयाँ बानेश्वरमा पनि कारबाही भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा सीसीटीभीको निगरानीबाट कारबाही गर्छौं । सर्भिलेन्स भेहिकलमार्फत काम गरिरहेका हुन्छौँ । प्रविधिमार्फत काम गरेकाले नदेखिएको हो ।
प्रयोगकर्ताले ट्राफिक नियम किन पालना गर्दैनन् ?
अधिकांशमा चेतना अभाव छ । नियमै थाहा छैन । बुझेकाले पनि जथाभावी गर्छन् । मानिस आफैँबाट अनुशासित हुनु जरुरी छ । ट्राफिक प्रयासले मात्र केही हुँदैन । यो चेतनाको कुरा हो ।
प्रकाशित: जेष्ठ १३, २०७६
ट्याग: सहरमामहानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा
‘बच्चालाई अस्पतालमै बाहिरी संसार’
‘गुम्बाका मूर्ति बुलेटप्रुफ बाकसमा’
भ्रमण वर्ष संयोजक सुरज वैद्यसँग नेपाल वार्ता : ‘जम्मा १० करोड मात्र दिने को ?’
‘जसले विशेष कुर्सी मुर्दावाद भन्छ,मेरो शैली त्यसैसँग मिल्छ’– माधव कुमार नेपाल
’अब कस्तूरी पाल्ने, बिना बेच्ने’
‘पदमार्ग जोगाउन पर्खाल’
‘व्यवस्थापन कहाँ सजिलो छ र !